Coca-Cola na Pepsi jiri kemịkal carcinogenic - Afrikhepri Fondation
Lọ CSPI (Center for Science in the Public Interest) kọwaara Daily Mail na Coca-Cola na Pepsi na-eji caramel, agba mmanya ha, nke bụ carcinogenic. N’ezie, ihe kemịkal abụọ na - akpata ọrịa kansa: 2-MI na 4-MI.
Onye ọnụ na-ekwuru maka nzukọ ahụ kwupụtara na: "N'adịghị ka caramel a kwadebere n'ụlọ, site na agbaze shuga n'ime pan, nsụgharị artificial na mmalite nke agba" coca "bụ nsonazụ kemịkal sitere na nchikota shuga, amonia na sulphites webatara na elu oku ”. Usoro a ga - emepụta ọgwụ abụọ ndị a na - egbu egbu, nke, dị ka ọmụmụ na òké, na - akpata ọrịa cancer nke ngụgụ, imeju, thyroid na ọrịa leukemia. Ndị ọkachamara na-ekwu na ụdị caramel nwere ike ịkpata ọtụtụ puku ọrịa kansa. Preventionlọ ọrụ mgbochi ọrịa toxicological nke America ga-akwado eziokwu ahụ na ihe abụọ a ga-abụ carcinogenic na ụmụ anụmanụ wee bụrụkwa na mmadụ. CSPI kwenyere na agba agba a anaghị eweta uru ọ bụla na-edozi ahụ maka ihe ọ drinksụ drinksụ, ọkachasị ebe enwere ụzọ ndị ọzọ iji nye agba aja aja na-acha oji, dịka beets na carrots.
Onye isi CSPI na-arịọ FDA (Nchịkwa nri na ọgwụ ọ Dụ thatụ) naanị ka amachibido ị drinksụ mmanya abụọ a.
O doro anya na ozi ọma a amasịghị mmadụ niile. Coca-Cola zara site na ikwusi ike na "ihe ọ ourụ ourụ anyị na-echekwa nke ọma" ma na-agbakwụnye na "mmezi nke CSPI maka ahụike mmadụ na ọrịa kansa enweghị ihe ndabere"
Ihe kpatara ịkwụsị ịṅụ mmanya ọṅụṅụ:
• Sodas adịghị edozi ahụ. Ọ bụ naanị sugar mmiri na nwekwara
• Ha na-abawanye n'ihe ize ndụ nke ibute oke ibu, ọrịa shuga, na -epe akwa
• Ha nwere ike ibute ọrịa ọkpụkpụ ma mee ka ọkpụkpụ na-eto ngwa ngwa
• Ihe ọ Theseụ Theseụ ndị a dị ize ndụ nye akụrụ, umeji na pancreas
• Ha na-egbochi ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke usoro nsị
• Site n'ọtụtụ ị concentrationụ caffeine, ha na-akwalite akpịrị ịkpọ nkụ na ụzọ mgbapụ nke mineral site na mmetụta mamịrị (nke agbakwunyere mgbakwunye mmetụta niile na-adịghị mma nke ị overụbiga ọgwụ caffeine)
• agba agba eji na sodas nwere ike ịbụ carcinogenic ụmụ mmadụ.
• Sodas nwere aspartame dị ize ndụ: naanị aspartame nwere mmetụta 92 na-emerụ ahụ ike
Aro maka imelite isiokwu:
Akwụkwọ akụkọ Coca-Cola:
N’obodo ụfọdụ, anyị anaghị esoro ndị otu na-ahụ maka otu ọrụ enye anyị nsogbu. Anyị na-egbu ha. Kemgbe afọ 2002, ndị ọchịehi gbagburu ndị ndu ọrụ karịrị narị anọ na iri asaa n'ụgwọ ụlọ ọrụ na-achọsi ike iji gbochie ndị ọrụ ha ịmakọrịta. N'ime ụlọ ọrụ ndị a ga-abụ Coca-Cola. N'ime ihe nkiri okporo ụzọ a na-adọrọ mmasị, mmadụ atọ na-eme mkpọtụ nke America na-amalite ịlụ ọgụ megide onye ukwu ahụ, na-ekpe ikpe n'ihu Courtlọikpe Federal nke United States na mkpọsa ikpe ikpe.
Obi, igwe na - enye ike nke na - echebe anyị
Akwụkwọ nsọ (PDF)
USA: ikike iji mee ka ọkpụkpụ
Gịnị bụ kemite?